Kenyan Airways oo ugu danbeyn heshay ruqsaddii ay ugu duuli laheyd Muqdisho - Halbeeg News
Kenyan Airways oo ugu danbeyn heshay ruqsaddii ay ugu duuli laheyd Muqdisho
NAIROBI (HALBEEG)- Shirkadda diyaaradaha ee Kenyan Airways ayaa la filayaa in maalmaha soo socda ay dib u bilowdo duulimaadyadii ay ku tegi jirtay magaalada Muqdisho ee caasimadda Jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya kadib markii shirkaddu ay heshay ruqsaddii ay ugu duuli laheyd Muqdisho.
Warsaxaafadeed uu soo saaray Maareeyaha Guud ee Shirkadda Kenyan Airways, Sebastian Mikosz ayuu ku sheegay in si shirkaddu ay u bilowda duulimaadyadeeda Muqdihso ay heshiis ceymis ah la gashay shirkadda ALS oo ah shirkad Kenyaan ah oo bixisa adeegga ceymiska.
“Qorshahan ayaa waxaa ku jira in la kireeyo diyaaraddii duulimaadka fulin lahayd, shaqaalihii ka howlgeli lahaa, dayactirka diyaaradda iyo ceymiska intaba” ayuu ku yiri, Sebastian Mikosz warkan uu soo saaray.
Duulimaadyada tooska ah ee maalinlaha ah waxa ay diyaaraddu Nairobi ka kicitimi doontaa garoonka Joma Kenyatta 1:00 duhurnimo iyadoo ka degi doonta garoonka Caalamiga ah ee Aadan Cadde ee Muqdisho 1:45 waxa ayna dib uga duuli doontaa 3:50 iyadoo Nairobi ka degi doonta 5:35 galabnimo.
Sida uu sheegay wargeyska Daily Nation duulimaadka waxaa fulin doona diyaaradda Emraer 145 oo qaadda 50 qof oo rakaab ah.
Arrinkan ayaa ku soo aadaya iyadoo Shirkadda caalamiga ah ee Qadar Airways ay ku dhowaaqday in ay bilaabi doonto duulimaadyada Muqdisho kadib markii uu raiisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre uu booqday todobaadkii lasoo dhaafay dalka Qadar.
Raisul wasaare Kheyrre iyo guddoomiye Mursal oo ka wadahadlay wadashaqeynta hay'adaha dowladda